Artificial Intelligence: လူသိအများဆုံးနှင့်အသုံးပြုသောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် AI | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 22/07/2021 06:00 | applications များ, အတော်ကြာ
Artificial Intelligence - လူသိအများဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံး open source AI ကို
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောနယ်ပယ်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းဖြစ်သည် "Artificial Intelligence" နည်းပညာ။ ဟုတ်တယ်၊ "ဉာဏ်ရည်တု" အများအားဖြင့်စပိန်သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၎င်း၏အတိုကောက်အားဖြင့်လူသိများသည်, "IA" သို့မဟုတ် "AI" အသီးသီး။ နှင့်သင်တန်း၏, ကနေသောသူတို့ကိုအလေးပေး ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်.
အဘယ်အရာကိုအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဖြစ်နိုင်သည်သောသူတို့အဘို့ "Artificial Intelligence" နည်းပညာဒီဟာနည်းပညာကိုအခြေခံထားတယ် လူ့ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုခြင်း simulation စက်တွေကအထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာစနစ်များ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သင်ယူခြင်းပါဝင်သည်အဆိုပါ ဆင်ခြင်ခြင်း နှင့် Self- ဆုံးမခြင်း။ ဖြည့်စွက်ကာ, အထူးသ applications များ "IA" ကျွမ်းကျင်သူစနစ်များပါဝင်သည်, မှတ်မိခြင်း အသံနှင့်အတုရူပါရုံကို။
2 ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Artificial Intelligence
2.1 Open Source လက်အောက်တွင်မည်သည့် Artificial Intelligence Technologies ရှိသနည်း။
2.1.4 မိုက်ခရိုဆော့၏သိမြင်မှုဆိုင်ရာကိရိယာ (CNTK)
2.1.5 အခြားပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် AI / ML / DL စီမံကိန်းများသည်ပိုမိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်
အပြည့်အဝဘာသာရပ်သို့မသွားမီ၎င်းသည်သတိပြုသင့်သည် Artificial Intelligence Technologies, များစွာသောအခြားအကြား, သောလက်ရှိမှတဆင့် run အင်တာနက်ကို သို့မဟုတ်သူတို့ကအပေါ်အကြီးအကျယ်မှီခို, သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ပေးသို့မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီရေစီးကြောင်းသတ်မှတ်သူမြားဖြစ်ကြသည် စတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေးငါတို့အသက်ရှင်နေကြသည်။ ထိုသူတို့ဖော်ပြခြင်းနှင့်သူတို့ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေရန် ဒီအဆင့်အရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများသူတို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မသန်စွမ်း ဒီအချက်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ, ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းနိုင်ပါတယ် ယခင်ဆက်စပ် post ချက်ချင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသောအတူ
ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Artificial Intelligence
Open Source လက်အောက်တွင်မည်သည့် Artificial Intelligence Technologies ရှိသနည်း။
အဆိုပါအကြား "IA" စူးစမ်းလေ့လာပြီးဖြစ်သည်၊ အခြားယခင်ထုတ်ဝေမှုများတွင် -
"OpenAI" စီမံကိန်းတစ်ခုထက်ပိုပြီး၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောပုဂ္ဂလိကအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း Artificial Intelligence စီမံကိန်းများ အားလုံးအတွက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဘယ်သူ့ရဲ့တာဝန်ကဒီအာမခံချက်ကိုအာမခံဖို့ဖြစ်တယ် "IA" လူသားအားလုံးအကျိုးအတွက်။
သို့သော်အတူတူပင် ၎င်း၏စီမံကိန်းများကိုအောင်အားဖြင့်ဤအကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည် "IA" အဖြစ်လူသိများ « Artificial General Intelligence (AGI) »အနာဂတ်ဖြစ်လာ မြင့်မားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစနစ်များစီးပွားရေးအရတန်ဖိုးအရှိဆုံးအလုပ်တွင်လူသားများကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်လူသားထုကိုရရှိနိုင်သည့်လူသားအချိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်း။ ၎င်းသည်အစပြုသည့်နောက်ဆုံးပေါ်လူသိများသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် GitHub Copilot.
ဒါဟာတစျဦးဖွစျသညျ Artificial Intelligence Platform အများဆုံးကမ္ဘာမှာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဲဒါကိုဖန်တီးခဲ့တာပါ Google (ဦး နှောက်) Apache 2.0 Open Source လိုင်စင်အောက်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိပြီး၎င်းကိုပိတ်ထားသောအရင်းအမြစ်ယခင်နေရာတွင်အစားထိုးသည် မင်္ဂလာပါ.
ဒါဟာအဖြစ်လိုက်ဖက်သည် open source စာကြည့်တိုက် လိပ်စာ နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူမှု၎င်းသည် Windows, Linux, MacOS နှင့် Android နှင့် iOS တို့ပါ ၀ င်သည့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်စနစ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည် အာရုံကြောကွန်ရက်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့် လူသားများအသုံးပြုသောသင်ကြားခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်မှုများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်။
၎င်းသည် TensorFlow နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးများဆုံး Artificial Intelligence Platforms တစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးအထက်, ဖြစ်ခြင်းများအတွက် အဓိက Facebook ကိုစာအုပ်ဆိုင် ၏လျှောက်လွှာများအတွက် နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူမှု။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အထုပ်ဖြစ်သည် Python ကို ဒီဇိုင်းထုတ်သည် ကိန်းဂဏန်းတွက်ချက်မှုလုပ်ဆောင် ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင် tensioner programming ကို။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့် Numpy အထုပ်အစားထိုးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
GPU ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ execute ကိုခွင့်ပြုသည် ဖျော်ဖြေသည့်တွက်ချက်မှုအရှိန်မြှင့်ရန်။ ၎င်းသည်နက်ရှိုင်းသောလေ့လာမှုနယ်ပယ်၌သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် အာရုံကြောကွန်ယက်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကတဆင့်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Artificial Intelligence ဖြေရှင်းချက် နှင့် နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုကိရိယာတန်ဆာပလာ ကြီးမားသောအလားအလာနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရန်လည်းလွယ်ကူပြီးသင်ဖန်တီးနိုင်သောစီးပွားဖြစ်အဆင့်အရည်အသွေးရှိသည် နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု algorithms လူ့ ဦး နှောက်နှင့်နီးကပ်သောအဆင့်၌သင်ယူနိုင်စွမ်း။
Microsoft က၎င်း၏ဖန်တီးသူက၎င်းကိုသေချာစေသည် open source tool ကို အရည်အသွေးပြည့်ဝသောမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ယနေ့ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်ဘာသာစကားများနှင့် algorithms များအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်။
အခြားပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် AI / ML / DL စီမံကိန်းများသည်ပိုမိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်
သင်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားစီမံကိန်းများသို့နစ်မြုပ်လိုပါက "Artificial Intelligence (AI)" နည်းပညာ နှင့် "နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်း (AP)" o «နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်း (DL) / စက်သင်ကြားခြင်း (ML) »အောက်ပါစီမံကိန်းများနှင့်ယခင်ဆက်စပ်စာပေများကိုလေ့လာနိုင်သည်။
Apache ကို Mahout
Apache ကို PredictionIO
IBM က Watson
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သော်လည်း «၎င်းသည် Open Source AI စီမံကိန်းမဟုတ်ပါ»လေ့လာရန်နှင့်လေ့လာရန်အနည်းငယ်လေ့လာခြင်းသည်ဘာလဲ၊ အမေဇုံ AI / ML န်ဆောင်မှုများ.
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ကျနော်တို့ဒီကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ ဝတ္ထုနှင့်ကြီးထွားလာနည်းပညာလယ်ပြင် အရာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက် "ဉာဏ်ရည်တု" နှင့် "နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်း (AP)", ၏အသုံးပြုမှုအတွက်စန်းလွတ်မြောက်ရန်မထားဘူး အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် အများပြည်သူ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနှင့်စီးပွားဖြစ်ကဏ္ sp အားလုံးတွင်ရှိသည်။ တဖန်အချိန်၌, သငျသညျဖြစ်ကြသည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် AI ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်အောင်, တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်ဆက်ကပ်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ရှိပြီးသားနှင့်အနာဂတ်ပြproblemsနာများရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Artificial Intelligence: လူသိအများဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးပြုသောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် AI
KDE Plasma Mobile 21.07 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးပြင်ဆင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုများစွာပါရှိသည်